Geohot enweela ike imepụta ụgbọ ala na-anya onwe ya | Esi m mac
Geohot enweela ike ịrụ ụgbọ ala na-anya onwe ya
Ichetara Geohot?. Nwa nwoke 17 onye bu onye mbu nwetara jailbreak maka ekwentị? Ọ bụrụ na otu nwata nwoke ka emechara mbanye anataghị ikike usoro DRM nke PlayStation 3 wee gaa rụọ ọrụ maka Google na 2014. Ọfọn, mgbe ọ hapụsịrị kamera ahụ otu afọ na ọkara, Geohot alaghachila iji gosipụta ọrụ ọhụụ ya: a ụgbọ ala onwe ịnya ụgbọ ala usoro. Mgbe ahụ anyị na-ahapụ gị video Onyeka Onwenu
Vidio ahụ si n’ajụjụ ọnụ a gbara na ‘Bloomberg’, ebe Geohot na-ekwu na ọ nweela ike ịmepụta ụgbọ ala na-anya onwe ya naanị otu ọnwa. O jiri 2016 ọcha Acura ILX ya mee ihe ebe ọ gbanwere ya iji tinye a laser dabeere na radar, ese foto na ihu y azụ, a ọystụ na ihuenyo nke 21,5 sentimita na etiti dashboard. Ogwe aka ọrụ dị ka ogige kọmputa na ụlọ obere PC nwere ngbanwe ntanetị na ihe mmetụta GPS.
Geohot nwere obi ike na ịkwọ ụgbọala nke onwe ya nke o kere na ọ ga-enye ya ya 'Nkà na ụzụ nke Mobileye', ụlọ ọrụ na-enye Google, Uber, na naa na ndị ọzọ bụ isi na-arụpụta ụgbọala.
Geohot na-eji ngwungwu ekwenti jiri ngwungwu ekwenti kwuru, nke a ga - enweta onye ọ bụla, nke ga - adị mma karịa ‘teknụzụ Mobileye’. Ọ na-ezube itinye ya maka ire ere yana igwefoto na ngwanrọ maka naanị $ 1000 onye ọ bụla maka ndị na-emepụta ụgbọ ala ma ọ bụ ndị na-azụ ahịa nwere mmasị. George Hotz (Geohot) egosila na ya na-ewe iwe Ilọn Musk ebe ọ bụ na onye nke ikpeazụ ahụ nyere ya ọrụ ma mgbe ya na ya kparịtachara ọnwa 3 n’ikpeazụ ọ naghị amị mkpụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Geohot enweela ike ịrụ ụgbọ ala na-anya onwe ya
Alejandro de la Luz Dávalos dijo
Enweela m ike ikwu ọnwa ole na ole gara aga banyere echiche m nwetara mgbe m na-atụle enyi na-enweghị isi na okporo ụzọ Jam na Mexico City na enyi, gịnị ma ọ bụrụ na obodo ahụ ga-abụ ụlọ ndụ dị ndụ karị?, M na-ekwu na enwere ike ịgbanye City n'ime onye nwere ọgụgụ isi Traffic njikwa.
Nke a ga - abụ site na ịkọ ma ọ bụ nyefee isi mmalite na mbata nke ụgbọ ala ọ bụla, n'ụzọ dị otu a obodo ga - enwe ike ijikwa okporo ụzọ n'okporo ámá, na - enwe data na - eri nri, ọ ga - enwe ike ịchọpụta ntụgharị ọbara na ya n'okporo ámá, dị ka nnukwu ọpụpụ na njedebe.
Taa enwere ike ijikwa ọkụ ọkụ na-achịkwa okporo ụzọ na-agafe obodo, gịnị bụ ihe ga-eme ka obodo nwee ọgụgụ isi iji mee ka njikwa okporo ụzọ ka mma na isi ihe a na nke nke onwe ịkwọ ụgbọala, ekwenyesiri m ike na ịjikọta abụọ a akụkụ ga-enyekwa obodo data ahụ ijikwa nduzi nke okporo ụzọ kwesịrị ịga site n'okporo ámá ya, dịka elekere nke ụbọchị ụbọchị na ọtụtụ ọnọdụ ndị ọzọ, yana site na ndepụta a, ụgbọ ala ọ bụla ga-ama ebe ebe ụgbọ ala ndị ọzọ.
Enwere m olile anya na enwere ike ịghọta echiche a ma were ya, echere m na onye maara etu esi agụ nke a ga-ahụ nke a, n'ihi na akụkụ m enweghị ụzọ isi zụlite echiche a, ọ masịrị m etu esi eche echiche a. mepụtara na n'ọdịnihu m ga-erite uru na ha, na-enye m ohere ụbọchị ụfọdụ ka m bụrụ okenye nke nwere nnwere onwe ọzọ ịkwaga
Na njedebe amaghi m onye ga-ege nti ma mepee echiche a, mana achoro m na mmadu ga eme.
Zaghachi Alejandro de la Luz Dávalos
Apple na - agbakwunye ozi njem Los Angeles na Maps
Civilization V: Mgbasa Ozi Edition, na ire maka obere oge